Dowladda imaaraarta oo Magaalada Dubai Kasoo Masaafurisay Ardaygii Soomaaliya Uga Qeyb gelayay Tartanka Qur'aanka Kariimka.
Monday June 12, 2017 - 13:05:41 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda isku tagga imaaraatka Carabta ayaa lagu sheegay in magaalada Dubai lagasoo eryay mid kamida Ardayda Soomaalida oo ka qeyb gelayay tartanka caalamiga Qu'aanka Kariimka oo sanad walba lagu qabto wadankaasi.
ismaaciil Madar ayaa UAE laga Eryay
Ismaaciil Cumar Madar oo ahaa Ardaygii Soomaaliya uga qeyb gelayay Tartanka Caalamiga ee Qur'aanka Kariimka ayaa lagu amray in uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha magaalada Dubai, ardaygan Soomaaliga ah ayaa kaalimaha hore uga jiray dadka tartanka ka qeyb qaadanayay wuxuuna ku guuleysan lahaa abaalmarin qaali ah.
isagoo kasoo muuqday Video kuna sugan garoonka diyaaradaha Dubai ayuu sheegay in isaga lagasoo saaray tartanka laguna amray in uu isag tago wadanka sababa la xiriira socdaalka wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Qadar uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Dowladda Dabadhilifka imaaraatka Carabta ayaa sidoo kale tartanka ka saartay arday ka socday Qadar oo ku sugnaa magaalada Dubai, isbahaysi ay ku midaysanyihiin Sacuudiga, Masar iyo imaaraatka Carabta ayaa ku dhawaaqay in ay xiriirkii ujareen dowladda Qadar waxayna wadaan dadaallo ay dowladaha caalamka islaamka uga dhaadhiciyaan in ay xiriirka ugu jaraan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Farmaajo ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegtay in ay dhax dhaxaad ka tahay arrinta khilaafka Khaliijka waxayna diiday in ay cilaaqaadka ujartay Sacuudiga.